निफ्राकाे आइपिओ भर्न छुटाउनु भएका सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अर्को ठूलो अवसर – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:५१ Basanta Khanal	0 Comments	share market
सर्वसाधारणलाई आईपीओ ल्याउने प्रस्तावसहित नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहको नेतृत्वमा काठमाडौं रि इन्स्योरेन्स नामक पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । अधिकृत पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ, जारी पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ रहने प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल चुक्ता पूँजी ७ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । सर्वसाधरणलाई ३ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ निष्काशन गरेर कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना छ । कम्पनीमा ७० प्रतिशत संस्थापक शेयर हुनेछ । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत संस्थागत र ३० प्रतिशत व्यक्तिगत तर्फबाट लगानी हुनेछ । यस्तै वाँकी ३० प्रतिशतको लागि सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गर्नेछ छ । ७० प्रतिशत संस्थापक मध्ये २० प्रतिशतसम्म विदेशी साझेदार वा पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिने गरी पत्राचार भइसकेको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।बीमा समितिका पूर्व अध्यक्ष शाहसहित महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ रमेशकुमार भट्टराई । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाईं र आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टको पहलमा नयाँ कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
करिव दुई साता पहिलाबाट दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु भएको रुरु जलविद्यतुको शेयर मूल्य मंगलबार एक हजार माथि पुगेको छ । लगातारको सर्किट लेवलले कम्पनीको शेयर मूल्य मंगलबार ११७० भएको छ । कम्पनीले प्रति शेयर १ सय २० कमा आईपीओ सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीको शेयरमा आज पनि माग उच्च रहेको छ । आक्रामक कारोबार भइरहेको छ । दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गइरहेकाले यसको मूल्य अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
← यो दुई मिनेटको नियम अपनाउँदा तपाईंको जीवन परिवर्तन गरिदिनेछ !
कोभिड बिरामीले निको भएको कती समय पछि खोप लगाउनु उपयुक्त ? : विशेषज्ञ समिति →